DOWNLOAD DRIVERS MAKA ASUS X55A - NDỊ ỌKWỌ ỤGBỌALA - 2019
Download ndị ọkwọ ụgbọala maka ASUS X55A
Site na ịwụnye ndị ọkwọ ụgbọala niile maka laptọọpụ gị, ọ bụghị nanị na ị ga-eme ka ọrụ ya rụọ ọtụtụ ugboro, kamakwa ị ga-ekpochapụ ụdị njehie na nsogbu niile. Ha nwere ike ime n'ihi n'eziokwu na components nke ngwaọrụ ahụ ga-arụ ọrụ na-ezighi ezi na esemokwu. Taa, anyị ga-ege ntị na laptọọpụ X55A nke ụwa a ma ama ASUS. Na nkuzi a, anyị ga-agwa gị otu esi arụnye ngwanrọ niile maka ụdị ihe akọwapụtara.
Esi achọta ma wụnye ndị ọkwọ ụgbọala maka ASUS X55A
Ịwụnye ngwanrọ maka ngwaọrụ laptọọpụ niile dị nnọọ mfe. Iji mee nke a, ọ dị gị mkpa iji otu n'ime ụzọ ndị a. Onye ọ bụla n'ime ha nwere uru nke onwe ya ma dabara na ọnọdụ ụfọdụ. Ka anyị lebakwuo anya na nzọụkwụ ndị dị mkpa ka a rụọ iji usoro nke ọ bụla.
Nzọụkwụ 1: Na-esi na ebe nrụọrụ weebụ gọọmenti
Dị ka aha ahụ pụtara, anyị ga-eji ụlọ ọrụ ASUS gọọmentị maka ịchọ na ibudata ngwanrọ. N'ebe ndị dị otú ahụ, ị ​​nwere ike ịchọta ndị ọkwọ ụgbọala nke ndị mmepe ihe na-emepụta onwe ha. Nke a pụtara na software dakọtara na-ejikarị dakọtara na laptọọpụ gị ma dịkwa mma. N'okwu a, usoro ga-abụ dị ka ndị a.
Soro njikọ na ebe nrụọrụ weebụ gọọmenti ASUS.
Na saịtị ị chọrọ ịchọta eriri ọchụchọ. Site na ndabara, ọ dị na akuku aka ekpe nke ibe.
Na nke a, ịkwesịrị ịbanye ihe nlereanya nke laptọọpụ nke achọrọ ndị ọkwọ ụgbọala. Ebe ọ bụ na anyị na-achọ software nke laptọọpụ X55A, wee tinye uru kwesịrị ekwesị na mpaghara ọchụchọ ahụ. Mgbe nke ahụ gasịrị, pịa bọtịnụ na keyboard "Tinye" ma ọ bụ aka ekpe-aka na akara ngosi na-egbuke egbuke. Ihe ngosi a dị n'aka nri nke ụlọ mmanya ahụ.
N'ihi ya, ị ga-ahụ onwe gị na ibe ebe a ga-egosipụta nsonaazụ ọchụchọ niile. Na nke a, ihe ga-esi na ya pụta bụ otu. Ị ga-ahụ aha laptọọpụ gị na-esote onyinyo ya na nkọwa ya. Ịkwesịrị ịpị njikọ dịka aha nlereanya.
Ozo nke a ga-etinye na laptọọpụ X55A. N'ebe a, ị ga-ahụ ọkwa dịgasị iche, azịza nke ajụjụ, ajụjụ, nkọwa na nkọwa. Iji nọgide na nchọta maka ngwanrọ, ọ dị anyị mkpa ịga na mpaghara ahụ "Nkwado". Ọ bụkwa na elu nke ibe.
Ọzọ ị ga-ahụ ebe ị nwere ike ịchọta akwụkwọ ntuziaka, akwụkwọ ikike na ihe ọmụma. Anyi choro nkeji "Ndị ọkwọ ụgbọala na ọrụ". Soro njikọ ahụ site na ịpị aha nke isi nke onwe ya.
Na nzọụkwụ ọzọ, ịkwesịrị ịkọwapụta sistemụ arụmọrụ nke arụnyere na laptọọpụ. Iji mee nke a, họrọ Osị chọrọ na omimi omimi site na ndepụta ndenye akara akara na nseta ihuenyo dị n'okpuru.
Ịhọrọ Osị chọrọ na iju omimi, ị ga-ahụ n'okpuru ọnụ ọgụgụ ndị ọkwọ ụgbọala dị. A ga-ekewa ha n'ime otu site n'ụdị ngwaọrụ.
Ịmepe ọ bụla nke ngalaba, ị ga-ahụ ndepụta ndị ọkwọ ụgbọala metụtara. Ngwaọrụ ọ bụla nwere aha, nkọwa, nha faịlụ ntanetị na ụbọchị ntọhapụ. Iji budata ngwanrọ dị mkpa ịkwesịrị ịpị bọtịnụ ahụ na aha ahụ "Global".
Mgbe ị pịrị na bọtịnụ a, nbudata nke archive na faịlụ nwụnye ga-amalite. Ihe niile ị ga - eme bụ wepụ ihe niile dị na archive ahụ wee jiri aha ahụ mee ihe nhazi ahụ "Mbido". N'ịgbaso ndụmọdụ nke Wizard Wụnye, ịnwere ike ịwụnye ngwanrọ ahọrọ. N'otu aka ahụ, ịkwesịrị ịwụnye ndị ọkwọ ụgbọala ndị ọzọ niile.
N'oge a, usoro a ga-agwụ. Anyị nwere olileanya na ị gaghị enwe njehie na usoro nke iji ya.
Usoro 2: ASUS Live Update Utility
Usoro a ga-enye gị ohere ịwụnye ọkwọ ụgbọala na-efu na-akpaghị aka. Tụkwasị na nke a, ọrụ a ga-elele ngwa ngwa arụnyere maka mmelite. Iji jiri usoro a, ịkwesịrị ime usoro ndị a.
Soro njikọ ahụ na peeji nke nwere ndepụta nke ọkwọ ụgbọala maka laptọọpụ X55A.
Mepee otu site na listi "Ntuziaka".
N'akụkụ a, anyị na-achọ ihe bara uru. "ASUS Live Update Utility" ma budata ya na laptọọpụ.
Mgbe nbudata ebe nchekwa ahụ, wepụ faịlụ niile na ya na folda dị iche ma na-agba ọsọ faịlụ a na-akpọ "Mbido".
Nke a ga-ebido installer. Naanị agbaso ihe ndị a, ma ị nwere ike ịwụnye ọrụ a ngwa ngwa. Ebe ọ bụ na usoro a dị nnọọ mfe, anyị agaghị adị na ya na nkowa.
Mgbe ejiri arụ ọrụ rụọ ọrụ na laptọọpụ, gbanye ya.
N'elu windo, ị ga-ahụ bọtịnụ dị n'etiti. A na-akpọ ya "Lelee maka mmelite". Pịa na ya ma chere ruo mgbe ị ga-eme ka laptọọpụ gị dị.
Na njedebe nke usoro ahụ, windo bara uru na-esonụ ga-apụta. Ọ ga-egosi ọtụtụ ndị ọkwọ ụgbọala na mmelite dị mkpa ka arụnyere na laptọọpụ. Iji wụnye ngwanrọ niile chọtara, pịa bọtịnụ ahụ na aha kwesịrị ekwesị. "Wụnye".
Nke a ga-amalite ibudata faịlụ niile dị mkpa. A windo ga-apụta na ị nwere ike ijikwa ọganihu nke nbudata faịlụ ndị a.
Mgbe nbudata ahụ zuru ezu, ọrụ ahụ na-emepụta ngwa ngwa niile dị mkpa. Naanị ị ga-echere ka echichi ahụ rụchaa wee mechie ọrụ ahụ n'onwe ya. Mgbe niile arụnyere software, ị nwere ike ịmalite iji laptọọpụ gị.
Usoro 3: Mmemme maka ịchọpụta software nyocha
Usoro a yiri nke gara aga. Ọ dị iche na ya naanị n'ihi na ọ na-adabara ọ bụghị naanị maka laptọọpụ ASUS, kamakwa maka ndị ọzọ. Iji jiri usoro a, anyi choro usoro ihe omume puru iche. A nyochaa ndị anyị bipụtara n'otu n'ime ihe ndị anyị gara aga. Anyị na-akwado ịgbaso njikọ dị n'okpuru ma mara ya.
Ọ na-edepụta ndị nnọchianya kachasị mma nke mmemme yiri nke ahụ na-achọpụta na ịchọpụta software na akpaaka. Kedu onye ị ga-ahọrọ bụ gị. N'okwu a, anyị ga-egosi usoro ịchọta ndị ọkwọ ụgbọala na-eji ihe atụ nke Auslogics Driver Updater.
Download usoro a site na njikọ nke edepụtara na njedebe nke isiokwu, njikọ nke dị n'elu.
Wụnye Auslogics Driver Updater na laptọọpụ. Usoro nhazi ahụ ga-ewe ọtụtụ minit. Onye ọrụ PC ọ bụla nwere ike ijikwa ya. Ya mere, anyị agaghị akwụsị n'oge a.
Mgbe arụnyere ngwanrọ ahụ, gbasaa usoro ihe omume ahụ. Ozugbo amalite usoro nyochaa laptọọpụ maka ndị ọkwọ ụgbọala na-efu.
Ná ngwụsị ule ahụ, ị ​​ga-ahụ ndepụta nke ngwa ndị ịchọrọ ịwụnye ma ọ bụ melite ngwanrọ. Lelee ndị na-akwọ ụgbọala na ịchọrọ ịwụnye na kọlụm aka ekpe. Mgbe nke ahụ pịa bọtịnụ ahụ Melite niile na ala nke windo ahụ.
Ọ bụrụ na ị nwere Windows System Restore kwụsịrị na laptọọpụ gị, ị ga-achọ ime ya. Ị nwere ike ime nke a site na ịpị "Ee" na windo na-egosi.
Mgbe nke ahụ gasịrị, nbudata nke faịlụ nwụnye ndị dị mkpa maka ndị ọkwọ ụgbọala na-adị na mbụ ga-amalite.
Mgbe ebugo faịlụ niile, ntinye nke ngwanrọ ahọrọ ahọrọ ga-amalite na akpaghị aka. Naanị ị ga-echere ruo mgbe usoro a gasịrị.
Ọ bụrụ na ihe ọ bụla na-aga n'enweghị njehie na nsogbu, ị ga-ahụ na ngwụcha windo ikpeazụ nke nbudata na nbudata ga-egosipụta.
Usoro nke ịwụnye software site na iji Auslogics Driver Updater ga-agwụ.
Na mgbakwunye na usoro a, ị nwekwara ike iji DriverPack Solution. Usoro a dị oke egwu n'etiti ndị ọrụ PC. Nke a bụ n'ihi mmelite ya mgbe niile na ntọala na-eto eto nke ngwaọrụ na ndị ọkwọ ụgbọala na-akwado. Ọ bụrụ na-amasị gị na DriverPack Ngwọta, ị kwesịrị ịmara onwe gị na nkuzi anyị, nke na-agwa gị otu esi eji ya.
Ọ bụrụ na ịkwesịrị ịwụnye ngwanrọ maka otu ngwaọrụ na laptọọpụ gị, ị ga-eji usoro a. Ọ ga-eme ka ịchọta ngwanrọ ọbụna maka ngwaọrụ a na-akpọghị. Ihe niile ị ga - eme bụ ịchọpụta uru njirimara nke ụdị ngwaọrụ dị. Ọzọ ịkwesịrị idetu uru a ma tinye ya na otu saịtị pụrụ iche. Ebe ndị dị iche iche dị iche iche n'ịchọta ndị ọkwọ ụgbọala site na iji ID. Anyị bipụtara ihe niile a na ihe gara aga. Anyị nyochaa usoro a n'ụzọ zuru ezu. Anyị na-adụ gị ọdụ ka ị soro njikọ dị n'okpuru ma gụọ ya.
Usoro a anaghị arụ ọrụ mgbe ọ bụla nke ndị gara aga. Otú ọ dị, iji ya, ị nwere ike ịwụnye ndị ọkwọ ụgbọala na ọnọdụ ndị dị egwu. Ị ga-achọ ihe ndị a.
Na desktọọpụ, pịa bọtịnụ òké aka nri na akara ngosi ahụ "Kọmputa m".
Na nchịkọta nhọrọ, họrọ akara "Njirimara".
Na mpịakọta aka ekpe nke window ahụ meghere, ị ga-ahụ akara na aha ahụ "Onye njikwa ngwaọrụ". Pịa ya.
Banyere ụzọ ndị ọzọ iji mepee "Onye njikwa ngwaọrụ" Ị nwere ike ịmụta site na isiokwu dị iche.
Na "Onye njikwa ngwaọrụ" Ị ga-achọpụta ngwaọrụ nke ịchọrọ ịwụnye ọkwọ ụgbọala ahụ. Dị ka anyị kwurula na mbụ, ọ nwere ike ịbụ ngwaọrụ a na-amaghị.
Họrọ akụrụngwa ma pịa aha ya na bọtịnụ òké. Na nchịkọta nhọrọ na-emepe, họrọ ihe ahụ "Ndị ọkwọ ụgbọala di elu".
Ị ga-ahụ windo nke ị ga-eme ka ịhọrọ ụdị faịlụ ọchụchọ. Kasị mma itinye "Nchọpụta akpaaka", dịka ọ dị na nke a, usoro a ga-achọ ịnwa ndị ọkwọ ụgbọala na ntanetị onwe ha.
Na ịpị na akara chọrọ, ị ga-ahụ windo na-esonụ. Ọ ga-egosipụta usoro ịchọrọ faịlụ ndị ọkwọ ụgbọala. Ọ bụrụ na ọchụchọ ahụ na-aga nke ọma, usoro ahụ na-ebunye ngwanrọ na-akpaghị aka ma tinye ntọala niile.
N'ikpeazụ, ị ga-ahụ windo na-egosipụta nsonaazụ. Ọ bụrụ na ihe niile na-aga nke ọma, a ga-enwe ozi gbasara ọganihu nke nchọta na ntinye.
Anyị na-atụ anya na isiokwu a ga-enyere gị aka ịwụnye ndị ọkwọ ụgbọala niile ngwa ngwa maka laptọọpụ ASUS X55A gị. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla ma ọ bụ njehie na usoro nhazi - dee banyere ya na ihe. Anyị ga-achọ ihe kpatara nsogbu ahụ ma zaa ajụjụ gị.